Kumanaan ISIS ah oo dib ugu noqonaya dagaalada ka socda Siiriya
WASHINGTON - Senator ka tirsan aqalada Barlamanka Mareykanka ayaa ka digey In 10,000 maxaabiis ka tirsana ururka ISIS kuwaas oo ku xiran xabsiyo ku yaal dalka Siiriya gaar ahaan dhulka Kurdish xakumaan dib ugu biiraan dagaalada.
Jabhada Kurdish 'SDF' oo qayb ka aheyd dagaaladii Mareykanka hogaaminayey ee lagaga adkaadey ISIS, ayaa sheegtey in kooxahaan dib u bilaaabaan dagaalada kadib markii Madaxweyne Trump kala baxay ciidamadiisa degaanadaas.
Senator Jeanne Shaheen oo ka tirsan xisbiga Dimoqaraadiga ayaa wargeyska Washington Post u sheegey " Waxaan hadda wajahayenaa rajada ah in 10,000 ISIS maxaabiis ah dib ugu noqdaan dagaalada."
Warkaan ayaa yimid kadib markii maamulka Kurdish sheegeen in duqeyn Turkiga u gaystey xabsi ku yaal magaalo ku taal xuduudka "Qamishli" halkaas oo ay ku jiraan maxaabiista ugu khatarsan ISIS, talaabadaas oo ay ku sheegeen iney aheyd mid lagu sii daynayo dadkaan.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitter ku qorey in Labo kamid ahaa Maxaabiista ISIS kuwooda ugu khatarsan loona haystey in madaxa dad ka goyn jireen u qaadeen dalka Mareykanka.
Dalka Mareykanka ayaa bilaabey iney ka baxaan goobihii ay ka fadhiyeen Woqooyiga Suuriya degaano ka tirsan halkaas oo ciidamada Turkiga damacsan yihiin iney la wareegaan.
Rag Daacish ah oo loo haysto dilal oo maxkamad lagu soo taagay Muqdisho
Soomaliya 27.07.2019. 15:39
Falalka Khaarijinta ayaa la sheegay in shaqsiyaadkan ay ka fuliyeen caasimada dalka iyo Boosaaso.
Hogaamiyaha Daacishta Soomaaliya oo shaashadaha kasoo muuqday
Puntland 21.07.2019. 09:55